Yintoni ukulandelwa kwemitha kwaye ngawaphi amakhadi evidiyo ekhoyo? Isiphelo sendlela on 🥇
Xa sifunda uphononongo lwemidlalo emitsha yevidiyo, sihlala sifumana igama likaRay lokulandela umkhondo xa kufikwa kwimizobo, nokuba bambalwa abasebenzisi abaziyo ukuba yeyantoni kwaye kutheni kubaluleke kangaka ukuvavanya ukulunga komdlalo. . Nangona umhla wokugqibela Ukulandelwa kukaRay yitekhnoloji enzima kwaye kunzima ukuyichaza Nangona kunjalo, ngamagama alula, sinokushwankathela ukusebenza kwayo ngamagama alula kwaye aqondakale lula, ukuze nawuphina umsebenzisi aqonde ukuba kutheni ukusetyenziswa kwayo kwimidlalo yesizukulwana esilandelayo kubaluleke kakhulu.
Kwesi sikhokelo siza kukubonisa yintoni i-ray yokulandelela kwaye siza kukubonisa amakhadi evidiyo axhasayo, ukuze sikwazi ukulenza ngokukhawuleza eli nqaku ngokukhawuleza xa sisungula umdlalo obandakanya ukusetyenziswa kwetekhnoloji (ihlala ibonakalisiwe kakuhle kuphononongo okanye kwithebhu yokujonga kwangaphambili yemveliso ekhethiweyo.
Isikhokelo sokulandela umkhondo weRay
Ukulandela umkhondo weRay kunzima ukukuchaza, kodwa ukusebenza kwayo kufuneka kuphandwe ngokupheleleyo ukuqonda ukuba zeziphi izibonelelo ezizisayo kwaye kutheni kuyacetyiswa ukuba uhlale uyishiya isebenza kwimidlalo eyixhasayo (inethi yemakhadi yemizobo esinayo). Ukuba asinalo ikhadi lemizobo elihambelanayo, siza kukubonisa ukuba zeziphi iimodeli esinokuzithenga ukuze silandele umkhondo kwimidlalo yePC.
Yintoni ukulandelwa kwemitha?
Ukulandela umkhondo weRay yitekhnoloji esebenza kwi-geometry ebonakalayo yokwakha ngokutsha umendo owenziwe kukukhanya, kulandela imitha yayo ngokusebenzisana nomphezulu. Ukukhanya kokwenyani kubonakala kuyo yonke imiphezulu kwaye kufikelela kwiliso lethu, elikutolika njengokukhanya kunye nemibala; Kumdlalo wevidiyo, le ndlela kufuneka ibalwe ngokuchanekileyo usebenzisa ialgorithm, ukuphinda wenze ukukhanya kunye nesithunzi ngendlela eyiyo; Okwangoku yeyona algorithm ilungileyo yokuphinda izibane kunye nezithunzi kufutshane ne-photorealism isebenzisa umkhondo we-ray xa unikezela umfanekiso we-3D.
Ngokulandela umkhondo we-ray osebenzayo, izithunzi zicacisiwe kakhulu kwaye izinto ezikhanyisiweyo (nakuphi na ukukhanya) ziyamangalisa ngokwenene, ezenza eyona mizobo ichanekileyo kwaye intle kumdlalo ngakumbi ngezigqibo eziphezulu (4K UHD).
Icala elisezantsi lokulandela umkhondo we-ray ifuthe layo ekusebenzeni kwalo naliphi na ikhadi lemizobo-Ukusebenza ngokukhanya okuyinyani kunye nesithunzi kufuna i-GPU enamandla kakhulu (mhlawumbi exhotyiswe nge-chip ezinikele kuphela ekulandeleleni i-ray), indawo eninzi yememori yevidiyo kunye nokusetyenziswa kwamandla okuphezulu. Ukuba sithatha isigqibo sokuvula umkhondo we-ray, sihlala sihlangana nokwehla kwintsebenzo iyonke, eya kuthi ngokuqinisekileyo ifune i useto oluncinci ngaphambi kokuba ufumane ukulungelelaniswa okufanelekileyo.
Ishedyuli yevidiyo enomkhondo we-ray
Ngaba unomdla kumgangatho wemizobo kunye nokulandela umkhondo we-ray esebenzayo? Ukuba ikhadi lethu levidiyo kutsha nje ngokwaneleyo (ubuncinci ngo-2019), kufuneka lixhase umkhondo we-ray ngaphandle kweengxaki, jonga nje useto lomdlalo olukhethileyo (oluhlala lukhona njengento ezinikeleyo (RTX okanye efanayo) okanye yenziwe isebenze ngemizobo ephezulu okanye Isiphelo esiphakamileyo). Ngaba ikhadi lethu levidiyo alixhasi ukulandela umkhondo we-ray? Singayilungisa kwangoko ngokukhetha enye yeethebhu ezingezantsi.
Ukuba sifuna ukugxila kwikhadi le-NVIDIA ukuthatha ithuba lokulandela umkhondo we-ray, sicebisa ukuba IGigabyte GeForce RTX 3070, Iyafumaneka kwiAmazon engaphantsi kwe- € 1000.
Kweli khadi levidiyo sifumana isizukulwane sesibini seCore RT, i-chip ezinikezelwe ekulandeleleni i-ray eqinisekisa ukufiphaza ngaxeshanye kunye nezibane zefotorealistic, kwinqanaba elitsha lokusebenza kolu hlobo lwetekhnoloji. Ukongeza kulungelelwaniso oluthile lokulandela umkhondo we-ray, sikwafumana inkqubo ephuculweyo yokupholisa kunye nenkqubo ezenzekelayo ye-overulsing, ethi inyuse ngokuzenzekelayo isantya se-GPU xa kufuneka ukubala okungaphezulu kokubala (njengaxa sisebenzisa ukulandelwa kwemitha).
Ukuba sifuna ukuthatha ithuba lokulandela umkhondo wekhadi levidiyo ye-AMD, sicebisa ukuba ugxile kuyo SAPPHIRE NITRO + AMD Radeon RX 6800 XT OC, Iyafumaneka kwiAmazon engaphantsi kwe- € 2000.
Ngaleli khadi siza kuba nakho ukuthatha ithuba lokulandela umkhondo we-AMD ohamba phambili, ulawulwe ngokudityaniswa kwesantya esiphezulu se-CU cores (akukho chip ezinikeleyo njenge-NVIDIA kodwa kukho inani elikhulu labasetyenzisi abancinci abakwaziyo ukuvelisa zonke izinto ezibonakalayo). Ukuba sifuna izisombululo ezingabizi kakhulu, siyakumema ukuba ufunde isikhokelo sethu. Amakhadi evidiyo afanelekileyo kwi-PC.
Ngaba umdlalo womdlalo wokuxhasa ukulandela umkhondo?
Ukuza kuthi ga ngoku sithethile ngamakhadi evidiyo e-PC, kodwa ukuba sitshintsha kugxila kwigumbi lokuhlala, zeziphi ezihambelana nokulandela umkhondo we-ray? Zinjani izinto ngoku I-PS4 kunye ne-Xbox One (induduzo yesizukulwana esidlulileyo) Ukulandelwa kwemitha akuxhaswangangelixa I-PS5 kunye ne-Xbox Series X yenkxaso yokulandela umkhondo ngofezekiso olunikezwe ngamakhadi e-AMD (kuba bobabini basebenzisa inguqulelo eguqulweyo ye-chip chip ekwikhadi levidiyo le-AMD yamva nje).
Ukuba sifuna ukuxhamla ngokulandela umkhondo ngaphandle kokuthenga isikhululo somdlalo wePC (nangaphezulu kwe- € 1200) vele ubambe enye yezi zinto zimbini zilandelayo kwaye ityhala useto lwemizobo ukuya kwelona liphezulu (kwimidlalo apho kukho umkhethi wekhwalithi yemizobo ekhoyo). Ngolwazi oluthe kratya ngesihloko sePS5, sicebisa ukuba ufunde isikhokelo sethu Injani iPS5? Uhlalutyo kunye nesikhokelo sePlaystation entsha.
Ukulandela umkhondo kukaRay kungayiguqula ngokwenyani imizobo yokudlala yanamhlanje, ngaphezulu kokunyusa umgangatho okanye ukunyamezelwa ukwamkelwa kwe-HDR: ukuba yinto enobunzima kunye ne-algorithm ehambileyo, kuya kuthatha ixesha ukudibanisa kuyo yonke imidlalo, kodwa ngayo siya kusondela. kwi-photorealism yokwenene.
Ngaba i-PC yethu ayisixhasi umkhondo we-ray? Kule meko kuya kufuneka senze uhlaziyo olubalulekileyo ukongeza kwikhadi levidiyo; ukwazi okungakumbi sikucebisa ukuba ufunde isikhokelo sethu Iimfuno zekhompyutha kunye nokubalulwa kokudlala imidlalo yevidiyo kwikhompyuter yakho mi Eyona PC inamandla yakha yanamhlanje-Ezona ziXhobo zeKhompyutha zibalaseleyo. Ukuba, ngokuchaseneyo, sifuna ukudlala imidlalo yePC kumabonwakude (endaweni yekhonsoli), sicebisa ukuba ufunde nzulu isifundo sethu. Idlalwa njani imidlalo yePC kwiTV.
Uvavanyo lobukrelekrele baseJapan luya kugqitywa kwimizuzu eli-15